October 14, 2019 - Myitter
ရန်ကုန်ကို အမှိုက်ကင်းစင်အောင် အမှိုက်မချကြဖို့ လိုက်လံတိုက်တွန်းနေတဲ့ Sinon Loresca ရဲ့ Video ဖိုင်
October 14, 2019 Myitter 0
( Video ဖိုင်ကို အောက်ဆုံးမှာတွဲပြီး တင်ပေးထားပါတယ် ) မြန်မာနိုင်ငံဟာ သူ့ရဲ့ ဒုတိယနိုင်ငံဖြစ်တယ်လို့ ဖွင့်ဟပြောဆိုပြီးတော့ မြန်မာနိုင်ငံကိုချစ်မြတ်နိုးတဲ့ ဖိလစ်ပိုင်မော်ဒယ် Sinon Loresca တစ်ယောက် ဟာ မြန်မာနိုင်ငံကိုဒုတိယအကြိမ်မြောက် ပြန်လည်ရောက်ရှိလည်ပတ်နေတာ အားလုံး အသိပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ ပထမအကြိမ်ခရီးစဉ်မှာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အထင်ကရမြို့နှစ်ခုဖြစ်တဲ့ ရန်ကုန်နဲ့မန္တလေး […]
အောင်လ အန်ဆန်း ကို တစ်ကမ္ဘာ့လုံးက မီဒီယာတွေ ဘယ်လို ချီးကျူးရေးသားခဲ့ကြသလဲဆိုရင်
ယခငျ ပို့ဈတှေ တုနျးမှာ ကတညျးက ကနြျောတို့ ပွောခဲ့ဖူးသလိုပါပဲ ၊ ဗီရာ ကို အနိုငျရရှိခဲ့ရငျ အောငျလ အနျဆနျးဟာ ကမ်ဘာကြျော တဈယောကျ ဖွဈသှားနိုငျခဲ့တယျ ဆိုတာ ဒီကနမှေ့ာတော့ တကယျ ဖွဈလာခဲ့ပါပွီ။ ဒီ One Century ပွိုငျပှဲကွီးဟာ MMA လောကရဲ့ […]
ခင်ဗျားတို့တွေ သီတင်းကျွတ်မှာ ကိုယ့်မိဘကို ပြန်ကန်တော့နေချိန်ကျုပ်တို့တွေတောထဲမှာ သေမင်းနဲ့စစ်ခင်းနေရတယ်။(ကျုပ်တို့လည်း ကိုယ့်မိဘကိုယ်ပြန်ကန်တော့ချင်တာပေါ့)ခင်ဗျားတို့တွေ ပွဲဈေးတန်းလေးလျှောက်လည်ပြီးး အစားကောင်းတွေစားပြနေချိန်။ကျုပ်တို့တွေ ငှက်ပျောအူနဲ့ထမင်းကြမ်းခဲ စားနေရတယ်။ (ကျုပ်တို့လည်းလျှောက်လည်ချင်တာပေါ့)ခင်ဗျားတို့တွေ ကောင်းစွာအိပ်စက်အနားယူနေချိန်။ကျုပ်တို့တွေ မအိပ်ပဲ ကင်းစောင့်နေရတယ်။(ကျုပ်တို့လည်းခေါင်းပြားအောင်အိပ်ချင်တာပေါ့)။ Source – Ye Thura Unicode ခငျဗြားတို့တှေ သီတငျးကြှတျမှာ ကိုယျ့မိဘကို ပွနျကနျတော့နခြေိနျ ကြုပျတို့တှတေောထဲမှာ သမေငျးနဲ့စဈခငျးနရေတယျ။ […]
ဂျပန်နိုင်ငံမှာ ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းက ဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့ တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းကာလအတွင်း ပိတ်မိနေသူတွေကို ရဟတ်ယာဉ်နဲ့ ကူညီကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်း လုပ်ဆောင်ချိန်မှာ အသက် ၇၇ နှစ်အရွယ် အဘွားအိုတဦးပြုတ်ကျ သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဒီအဖြစ်အပျက်ဟာ ဖူကူရှီမားဒေသ၊ အိုင်ဝါကီမြို့မှာ အောက်တိုဘာ ၁၃ ရက်နေ့၊ ဒေသစံတော်ချိန် မနက် ၁၀ နာရီလောက်မှာ ဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဘွားအိုအား ဆေးရုံကို […]
ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းက ဂျပန်နိုင်ငံကို ဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့ တိုက်ဖွန်းမုန်တိုင်းဟာ ဂီဘိစ်ကြောင့် ပနားမား ကုန်တင်သင်္ဘောတစင်း နစ်မြုပ်ခဲ့ပြီး ၅ ဦး သေဆုံးကာ ၃ ဦး ပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့ ဂျပန်ကမ်းခြေစောင့်တပ်က ပြောပါတယ်။ တန်ချိန် ၁၉၂၅ တန်ရှိတဲ့ အဆိုပါ ကုန်တင်သင်္ဘောပေါ်မှာ မြန်မာနိုင်ငံသား ၃ ဦး၊ တရုတ်နိုင်ငံသား […]
ကိုရီးယား နာမည်ကြီး အမျိုးသမီး Idol အဖွဲ့ရဲ့ အဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတစ်ဦးဖြစ်သူ Sulli သေဆုံးကြောင်း ရဲတွေအတည်ပြု နာမည်ကြီး အမျိုးသမီး Idol အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ f(x) ရဲ့ အဖွဲ့ဝင်ဟောင်းဖြစ်သူ Sulli တစ်ယောက် သူမရဲ့ နေအိမ်မှာ သေဆုံးသွားပြီဆိုတဲ့ သတင်းတွေဟာ ဒီနေ့ ညနေပိုင်းမှာ ရဲတွေဆီကနေတဆင့် […]
မတူညီတဲ့ ၀ိတ်တန်း နှစ်ခုရဲ့ချန်ပီယံ အောင်လ အန်ဆန်း ရဲ့ နောက်ထပ် ခြေလှမ်းက ဘာဖြစ်မလဲ?
အောငျလ အနျဆနျး ရဲ့ နောကျထပျ ခွလှေမျးက ဘာဖွဈမလဲ? Unicode အောငျလ အနျဆနျး နဲ့ ဗီရာ တို့ ထိုးသတျခဲ့တဲ့ ပှဲစဉျကတော့ ပွီးဆုံးသှားခဲ့ပါပွီ။ ဖီလဈပိုငျသားတှရေဲ့ ဟီးရိုးကွီး ဖွဈတဲ့ ဗီရာဟာ ဒီပှဲမှာ အောငျလ ကို အဘကျဘကျက ယှဉျပွိုငျနိုငျခွငျး မရှိပဲ […]
အောင်လ”လက်ဝှေ့ပွဲအပြီး ၀မ်းသာအားရ ထရပ်စဉ် ရုတ်တရက် လဲကျသေဆုံးခဲ့တဲ့ သူ
အောင်လအန်ဆန်း ပွဲကြည့်နေရင်း ၀မ်းသာအားရ ထရပ်စဉ် ရုတ်တရက် လဲကျသေဆုံးခဲ့တဲ့ သူ အောင်လ”လက်ဝှေ့ပွဲအပြီးအားပေးကြည့်ရှုခဲ့ရာမှအမျိုးသားတစ်ဦးသေဆုံး တနိုင်း အောက်တိုဘာ ၁၄ ရက် ကချင်ပြည်နယ် တနိုင်းမြို့ မုန်ဒိန်ရပ်ကွက် အေးသုခအပိုင်း တနိုင်း-မိုင်ခွန်သွားလမ်းဘေးတွင်၂၀၁၉ခု အောက်တိုဘာ ၁၃ ရက်နေ့ ည အောင်လ လက်ဝှေ့ပွဲကို နေအိမ်၌ အားပေးကြည့်ရှုနေသော […]
မွနျမာတှေ အတှကျ တော်တေ်ာလေး ရှကျဖို့ကောငျးလာပွီ….
မွနျမာတှေ အတှကျ ရှကျဖို့ကောငျးလာပွီ…. အရင်က ဇော်ဂျီသုံးနေရာကနေနိုင်ငံတကာ ခေတ်မီအောင်၊ နိုင်ငံ့အဝှမ်းက သတင်းတွေကို လွယ်ကူစွာ သိခွင့်ရရှိအောင်၊ ကိုယ့်နိုင်ငံက ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေကို ကမ္ဘာက အမှန်တရားအတိုင်းသိခွင့် ရရှိအောင်၊ (ဒီအထဲမှာ အဆင်ပြေမှု၊ အဆင်မပြေမှု၊ ပျော်ရွှင်မှု၊ အကျင့်ပျက်မှု အစရှိသဖြင့်ပေါ့) လွယ်လွယ်နဲ့ အလိမ်မခံရအောင်၊ လျင်လျင်မြန်မြန် […]